Fanazavana | Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2017: “Aza Kivy!”
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albaney Alemà Alur Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Asamey Attié Aukan Aymara Azerbaijaney Bambara Baoulé Bassa (Cameroun) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Cakchiquel Afovoany Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Dusun Esan Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Ga Galoà Garifuna Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Huaxtèque (San Luis Potosi) Huichol Hunsrik Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabuverdianu Kabyle Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mayo Mazahua Mazateky (Huautla) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Otomi (Meksika) Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Shuar Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tarahumara Afovoany Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yacouba Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Ixtlán) Zapoteky (Villa Alta) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2017
FANOMPOANA AO AMIN’NY BETELA: Hisy fivoriana ho an’izay maniry hanompo ao amin’ny Betela ny zoma tolakandro. Afaka manatrika azy io ny mpitory vita batisa 35 taona no ho midina. Hampahafantarina mialoha ny toerana sy ny fotoana hanaovana an’io fivoriana io.
SEKOLIN’NY MPITORY ILAY FANJAKANA: Hisy fivoriana hatao ho an’ireo maniry hanatrika an’io sekoly io ny alahady tolakandro. Hasaina ho tonga amin’izany ny mpisava lalana 23 taona ka hatramin’ny 65 taona, ary maniry hampitombo ny fanompoany. Hampahafantarina mialoha ny toerana sy ny fotoana hanaovana an’io fivoriana io.
ASA AN-TSITRAPO: Raha te hanampy amin’ny asa mifandray amin’ny fivoriambe ianao, dia iangaviana mba hanatona ny Sampan-draharahan’ny Filan-kevitra sy Asa An-tsitrapo.
BATISA: Eo anoloan’ny lampihazo ny toerana voatokana ho an’ireo hatao batisa, raha tsy misy fiovana. Tokony ho efa eo amin’ny toerana natokana ho azy izay rehetra hatao batisa, alohan’ny hanombohan’ny lahatenin’ny batisa, ny asabotsy maraina. Tokony hitondra servieta izy ireo ary koa fitafiana maotina mba hanaovany rehefa haroboka izy.
FANOMEZANA: Betsaka tokoa ny fandaniana natao mba hahatonga ny fivoriambe hahafinaritra sy hanampy antsika ho akaiky kokoa an’i Jehovah. Anisan’izany ny fikarakarana ny seza, ny fanamafisam-peo, ny efijery, ary ny maro hafa. Manampy hanonerana an’izany fandaniana izany ny fanomezana an-tsitrapo ataonao, ary mampandroso ny asa maneran-tany. Nametrahana boaty maromaro ao amin’ny toerana anaovana fivoriambe, mba hanamora ny fanaovanao fanomezana. Tena ankasitrahana ny fanomezana rehetra. Misaotra anao ny Filan-kevi-pitantanana, noho ianao tia manome ka mampandroso ny asan’ilay Fanjakana.
FITSABOANA VONJIMAIKA: Tadidio fa izay mila fitsaboana VONJIMAIKA IHANY no karakaraina ao.
MPIKARAKARA NY MPANATRIKA: Notendrena hanampy anao ireo mpikarakara ny mpanatrika. Iangaviana ianao hiara-miasa tsara aminy, ka hanaraka ny toromarika omeny momba ny fametrahana fiara, ny fandaminana ny mpanatrika, ny famandrihan-toerana, sy ny sisa.
TOERANA: Iangaviana ianao mba hihevitra ny hafa. Tadidio fa ny fianakavianao akaiky, na ireo miray fiara na miray trano aminao, na ny olona ampianarinao Baiboly ihany no azonao amandrihana toerana. Aza ametrahana entana izay toerana tsy nofandrihanao.
ZAVATRA VERY SY HITA: Tokony hoentina any amin’ny Sampan-draharahan’ny Zavatra Very sy Hita ny zavatra hita rehetra, raha tsy fantatra ny tompony. Manatòna an’io sampan-draharaha io raha very zavatra ianao. Tokony hoentina any koa ny zaza very. Tsy tokony hoheverina ho toerana fitaizana zaza anefa any. Iangaviana àry ianao mba hanara-maso ny zanakao. Aza avela hisaraka aminao izy ireo.
Alamin’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah
Inona no tsy itovizan’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny fivavahana hafa?
Fampahatsiahivana Momba ny Fivoriambe